Ganacsiga Suuqa Bakaaraha Muqdisho oo haweenka ka dhex muuqdaan
Buluugleey November 19, 2005
Suuqa Bakaaraha ayaa ugu weyn suuqyada magaalada Muqdisho, wuxuuna ku yaalaa Koonfurta Muqdisho. Suuqa oo aad u balaaran ayaa waxaa durbadiiba indhahaaga qabanayaa dhaq-dhaqaaqa ganacsiga oo intiisa badan gacanta ugu jirto haweenka. Suuqa oo hawl aan joogsi lahayn kana jirto ganacsi aan kala go'lahayn ayaa talada maamulka ganacsiga suuqa u degsan ay haweenku sin toos ah gacanta ugu hayaan. Haweenka oo aad xariif ugu ah xeeladaha wax-kala iibsiga, dulqaadna u leh gor-gortanka ayaa ku guuleysta inta badan inay ka macaashaan waxybaaha ay iibinayaan sida dharka, dahabka cuntada iyo alaabo kaloo fara badan oo macaamiisha aad u xiiseeynaaan. Suuqa waxaa lagu kala iibsadaa wax alaale wixii qof bini'aadan ah u baahanyahay waxaana aad dareemeysaa xoriyada ka maran dalka Soomaaliya intiisa kale inay ku kooban tahay suuqa Bakaaraha gudihiisa.
Shirkadaha waaweyn ee caalamka ayaa iyaguna u beeray wax soo saarka alaabada indhaha sarcaadka ah ee soo jiita indhaha dumarka kuwaas oo la ogaadey inay ka macaash badan yihiin kuwa raggu xiiseeyaan. Taa ayaa waxaa keentay in wax kala iibsiga inuu u gaar yahyihiin haweenka, raguna meelna uga abanaaneyn . Dukaamada faraha badan ee ku kala yaal daaraha waaweyn ee suuqaa Bakaaraha ayaa badankooda la ciir-ciiraya badeecdo indhaha dadka soo jiita, xitaa hadii qofku uusan ujeedadiisu ahayn inuu wax iibsado baa ilbiriqsi maskaxdiisu isku bedelsaa oo isagoon filaneynin buu jeebka gacanta daraa.
Somaaliya oo aan dawladi nidaam iyo kala danbeyn lahayn baa suuqa Bakaaraha amaankiisu yahay heer sare . Wuxuxuu suuqu ku dhisan yahay nidaam ganacsi oo xor ah oo aad moodid inuu kala jaanqadayo nidaamka ka jira dunida xorta ah. Taana waxaa ugu wacan haweenka oo lafdhabar u ah xasiloonida jawiga suuqa suurta geliyeyna inuu ahaado meel ka dhaxeysa umada Soomaaliyeed.